Jurgen Klopp muxuu ka yiri dhaawaca daafaca Virgil van Dijk iyo kulanka Chelsea? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jurgen Klopp muxuu ka yiri dhaawaca daafaca Virgil van Dijk iyo kulanka Chelsea?
(28-9-2018) Macalinka kooxda Kubada cagta Liverpool Jurgen Klopp oo shir Jaraa id qabtay Jimcihii ayaa shaaca ka qaaday War ay ku farxeen Taageerayaasha Liverpool kadib markii uu Cadeeyey in kulanka Chelsea uu Cayaari doono daafaca dalka Holland ee Virgil van Dijk.
Jurgen Klopp ayaa beeniyey Warar warbaahintu baahisay oo ah in Virgil van Dijk uusan Cayaari doonin kulanka ay Sabtiga la cayaarayaan kooxda dhibco ahaan ku soo xigta ee Chelsea waxaana uu ku adkaystey in uu diyaar yahay isla Markaana uu kasoo kabtayb dhaawicii gaaray.
Virgil van Dijk ayaa dhaawac soo gaaray kulankii ay Liverpool kaga badisay Southampton 3-0 waxaana uu ka maqnaa sidoo kale kulankii koobka Carabao Cup ee Chelsea kaga badisay 2-1 waxaana la leeyahay waxa uu Cayaari doonaa kulanka muhiimka ah ee Sabtiga dhici doona.
Waxaa dhici doona Kulanka caalamka oo dhan laga wada sugayo ee dhex mari doona kooxaha Chelsea iyo Liverpool oo isku haysta cidii hogaamin lahayd Horyaalka waxaana Cayaartaas laga daawan doonaa Geeska Africa Saacadu marka ay tahay 7-30 daqiiqo fiidkii habeenka Sabtiga.